စာတန်၏မျက်စိကွယ်စေခြင်းအကျဉ်းချုပ် | Satanic Blinding | Real Conversion
ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၂၂ ) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
"ငါတို့ဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားသည် ဖုံးအုပ်လျက်ရှိလျှင်၊ ဆုံးရှုခြင်းသို့ ရောက်သောသူတို့အားသာ ဖုံးအုပ်လျက်ရှိ၏။ ထိုသို့မယုံကြည်သောသူတို့ကား၊ ထိုသို့မယုံကြည်သောသူတို့ကား၊ ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဍန်တော်တည်းဟူသော ခရစ်တော်၏ဘုန်းအသရေနှင့်ပြည့်စုံသော ဧဝံဂေလိတရား၏အရောင်သည် အ လင်းကို မပေးစေခြင်းငှါ၊ ဤလောကကိုအစိုးရသောဘုရားသည် သူတို့၏ဥာဏ် မျက်စိကို ကွယ်စေ၏။" ( ၂ကော ၄း ၃-၄ )
ဤနံနက်တွင် စာတန်အကြောင်းကို ကျွန်ုပ်ပြောပြမည်။ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်ပြင်ဆင် ဖူးသမျှ သောတရားဒေသနာတွင် အခက်ခဲဆုံးဖြစ်ပါသည်။ စာတန်က ဤအကြောင်းဟော ပြောသည်ကို အလိုမရှိပေ။ ကျွန်ုပ်တွင် အခြေခံသဘောတရားတစ်ခုအဖြစ် Dr. Criswell ရေး သားသည့်စာအုပ်တစ်အုပ်ရှိသည်။ စာတန်နှင့်နတ်ဆိုးအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်လေ့လာသင်ယူခဲ့ သည်။ တရားဒေသနာ၏နိဒါန်းပိုင်းတွင် သူရေးသားသောစာအုပ်ကို အသုံးပြုထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏စာပွဲတွင် စာအုပ်များကို ထားသည်။ ကျွန်ုပ်မတွေ့မြင်ဖူးသောတရားဒေသနာအ ကြောင်းကို ဟောကြားရန် ကျွန်ုပ်ပြင်ဆင်ရသည့်အချိန်ရောက်လာသည်။ ၎င်းသည် ပျောက် သွားဟန်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏လေ့လာသင်ယူမှုတွင်ရှိသော်လည်း၊ ထိုအရာကိုကြည်ရှုရန် နာရီ သုံးချက်ခန့် လေ့လာရမည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်မတွေ့ရှိခဲ့ပါ။ စာတန်သည် ထိုအရာနှင့်လုပ် ဆောင်ရမည့်အရာရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်သိသည်။
Ileana အိမ်သို့လာခဲ့သည်။ ထိုအရာတွေ့ရှိဖို့ရန် ဘုရားသခင်အကူအညီပေးဖို့ ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းမိသည်။ Ileana သည် ကျွန်ုပ်စာပွဲပေါ်တွင်ရှိသောစာအုပ်အားလုံးကိုလှန် လျောပြီးရှာဖွေသည်။ ကျွန်ုပ်စဉ်းစားသောအရာကို လုပ်ဆောင်နေသည်ဖြစ်၍၊ ထိုတွေ့ခဲ့သော နေရာတွင် တစ်ကြိမ်ကြည့်ရှုမည်။ ကျွန်ုပ်သုံးကြိမ်ကြည့်ရှုသည်။ သို့သော် တဖန်ထပ်၍ကြည့်ရှု မိသည်။ ထိုနေရာတွင်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်နှလုံးသည် ခုန်ပေါက်မတတ်ပျော်ရွှင်ခဲ့သည်။ ဘုရားသ ခင်သည် ကျွန်ုပ်၏ဆုတောင်းသံကို နားညောင်းတော်မူပြီး ထိုစာအုပ်ရှိသောနေရာကိုပြသခဲ့ သည်။
တစ်စုံတစ်ယောက်က စာအုပ်ရှာခြင်းသည် အသေးအမွားဖြစ်သည်ဟုဆိုပေမည်။ သို့ သော် ကျွန်ုပ်တို့အသေးငယ်ဆုံးသောအရာဟုထင်ရသောနေရာတွင် စာတန်သည် ဂရုစိုက္ပြီး နှံနှံ့စပ်စပ္ရှိလှပါသည်။ "စာတန်"တွင် ဟေဗြဲနာမည်ရှိသည်။ "Sawtan" ဖြစ်ပြီး ဆိုလိုသည်မှာ "ဆန့်ကျင်သူ"၊ "တော်လှန်ပုန်ကန်သည်"၊ "ရန်သူ"၊ "တော်လှန်သူ"၊ ဖြစ်သည်။ "စာတန်"တွင် "တိုက်ခိုက်သူ" ဟူသော အခြားဟေဗြဲစကားလုံးလည်းရှိပါသည်။ စာတန်သည် ဘုရားသခင်၏ ရန်သူဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သည်။ ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်မှုကို တိုက်ခိုက်သည်။ သူသည် တန်ခိုးရှိသောသူဖြစ်သည်။ Dr. W. A. Criswell သည် ထက်စဲခ် ပြည်နယ်ရှိ First Baptist Church of Dallas သင်းအုပ်ကို ခြောက်ဆယ်နှစ်ကြာ မျှလုပ်ဆောင်ခဲ့ သည်။ သူသည် သမ္မာကျမ်းဆိုင်ရာ ဂရိနှင့်ဓမ္မပညာတွင် Ph.D. ရရှိခဲ့သည်။ သူသည် ကျမ်းစာ အမှားအယွင်းကင်းရှင်းမှုတွင် ထိပ်ဆုံးကဖြစ်သည်။ သူသည် တောင်ပိုင်း နှစ်ခြင်းတရားဟောဆရာကြီးဖြစ်သည်။ ၂ဝရာစုတွင် အကြီးမားဆုံးသော တရားဟောဆရာ တစ်ဦးပင်ဖြစ်ပါသည်။
စာတန်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကျမ်းစာကျောင်းနှင့်သင်ကြားသူများတွင် ထူး ချွန်ထက်မြစ်စွာရပ်တည်နသည်။ သူသည် ပညာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ် တွင် သဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး ဘုရားသခင်က စွန့်ပစ်သည်မစွန့် ပစ်သည်ကို သေချာစေချင်သည်။ စာတန်သည် ဤလောက၏ဘုရား ဖြစ်သည်။
စာတန်သည် ဘာသာတရားကို နှစ်သက်စွဲလန်းသည်။ ရှေး ကမ္ဘာ၏အကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုလည်း ဗာဗုလုန်ဘုရား၊ အီဂျစ်ပြည်၏ဘု ရား၊ ဂရိ၊ ရောမတို့၏ဘုရားစသဖြင့် ပြောဆိုလေ့ရှိပါသည်။ ယနေ့အိန္တိ ပြည်တွင်လည်း ဘုရားပေါင်း ၃၃၅ခုရှိပါပြီး ၎င်းကို ကိုးကွယကြပါသည်။ စာတန်က ထိုအရာကို နှစ်သက်သည်။ စစ်မှန်သောဘုရားကိုစွန့်ပစ်ထား ပြီး ကိုယ်ကြိုက်သလိုကိုးကွယ်ခြင်းကို စာတန်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသည်။ စာတန်သည် လောကကြီးတွင်ရှိသော ဘာသာတရားကို နှစ်သက် သည်။ သူသည် ဗုန္တဘာသာတို့ကိုးကွယ်သည့်ပုံစံကိုကြိုက်သည်။ ဟိန္ဓူ၊ မွတ်စလင်တို့ကိုးကွယ်သည့် အာလစသည်တို့ကို နှစ်သက်သည်။ သန်း ပေါင်းများစွာသောသူတို့သည် ထိုအဘုရားများကို ကိုးကွယ်ကြပြီး စာတန်ကျေနပ်လျက်ရှိသည်။ စစ်မှန်သောဘုရားကိုမူ စွန့်ပစ်ကြသည်။
စာတန်သည် နံနက်သားဖြစ်သည်။ သူသည် ၎င်းလှည့်ဖြား သောသူတို့၏အနာဂတ်အဆုံးကို ဝှက်ထားပါသည်။ ခြားနားစေသောသူ ဖြစ်ပါသည်။ သူ့ကိုကြည့်ရှုသည်။ သူသည် ၎င်း၏လက်ထဲတွင်ရှိသော ဖန်ခွက်နှင့် ကွဲပြားခြားနားမှုကို လုပ်ဆောင်သောသူဖြစ်ပါသည်။ သို့ သော် သူသည် မိမိအံဖတ်တွင်မူယဇ်နေသောသူများ၊ ထိခိုက်နာကျင် သောမိသားစုများ၊ နှလုံးကြေကွဲသောမိသားစုများ၊ မိဘမဲ့များ၊စသည်တို့ ကို ဝှက်ထားလျက်ရှိသည်။ သူသည် အလွန်ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သူ ဖြစ်ပါသည်။ (လောက၏ဘုရားလည်းဖြစ်ပါသည်။)
သူသည်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်၊ကယ်တင်ရှင်၊သခင်ယေရှု၊ ၏အသင်းတော်ကို လှည့် ဖြားသည်။ ရှင်ပေါလုက အသင်းတော်အတု အယောင်အကြောင်းကို ဖော်ပြထားပါသည်။ "ဘုရားတရားရှိဟန်တူ သော်လည်း၊ တန်ခိုးတော်ကို ငြင်းပယ်သည်။ ( ၂တိ ၃း ၅) အတုအ ယောင်အသင်းတော်က စာတန်၏နက်နဲခြင်းကိုသိရှိသည်။ ဘုရားသခင် ၏နက်နဲသောအရာကို လျှိုထားသည်။ ထို့ကြောင့် စာတန်က သူတို့ကို ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ သူတို့က ဘာသာတရားမရှိဘဲ လောကကြီးကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်။ပျောက်ဆုံးသူများအတွက် ပြောစရာမရှိပါ။ မ ပြောင်းလဲသေးသူများပြောင်လဲလာရန် မကြိုးစားပါနှင့်။ လှပကြော့ရှင်း အောင်၊ ထူးချွန်အောင်သာလုပ်ဆောင်ပါ။ သို့သော် ကယ်တင်သော ကယ်တင်ရှင်ကို ချန်လှစ်ထားပါ။ ထိုအရာမှာ စာတန်ပင်ဖြစ်သည်။ (လောက၏ဘုရားပင်ဖြစ်ပါသည်။ )
သူသည် အလွန်ထူးချွန်ပြောင်မြောက်လှပေသည်။ အလင်း ၏သားလည်းဖြစ်ပါသည်။ စာတန်သည်လှည့်ဖြားခံရသူတို့၏ အနာဂတ် ကိုဝှက်ထားလျက်ရှိပါသည်။ (W. A. Criswell, Ph.D., ''လူစီဖာ၏ကျ ဆုံးခြင်း'', သမ္မာကျမ်းစာခံယူချက်၊ စာတန်အကြောင်း၊ အတွဲ ၇၊ Zondervan Publishing House, ၁၉၈၇၊ စာ-၉၃-၉၅)
သို့သော် သူက ခရစ်တော်မပါဘဲ အသက်ရှင်ရခြင်း၏ပျက်စီးသောအသက်တာကို လျှို့ဝှက် ထားပါသည်။ ဘာမျှမရှိခြင်း၊ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာကောင်းခြင်းတို့ကို ဝှက်ထားသည်။ ခရစ်တော်မရှိ ဘဲသေခြင်း၊ မျှော်လင့်မဲ သချုၤိင်းတွင်ရှိနေခြင်းကို ဝှက်ထားသည်။ ကယ်တင်ခြင်းမရသူတို့အ ပေါ်ကျရောက်မည့် တရားစီရင်ခြင်းကို ဝှက်ထားသည်။ ထာဝရမီးအိုင်ထဲတွင်မယုံကြည်သူတို့ ထာဝရကြုံတွေ့ရမည့်ဒုက္ခဆင်းရဲအကြောင်းကို ဝှက်ထားသည်။ ထိုအရာမှာ စာတန်ပင်ဖြစ်ပါ သည်။ ထိုသူမှာ ဤလောက၏ဘုရားပင်ဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ စာတန်အကြောင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ ရှင်ပေါလုပြောဆိုချက်ဖြစ်သည်။
"ငါတို့ဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားသည် ဖုံးအုပ်လျက်ရှိလျှင်၊ ဆုံးရှုခြင်းသို့ ရောက်သောသူတို့အားသာ ဖုံးအုပ်လျက်ရှိ၏။ ထိုသို့မယုံကြည်သောသူတို့ကား၊ ထိုသို့မ ယုံကြည်သောသူတို့ကား၊ ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဍန်တော်တည်းဟူသော ခရစ်တော်၏ ဘုန်းအသရေနှင့်ပြည့်စုံသော ဧဝံဂေလိတရား၏အရောင်သည် အ လင်းကို မပေးစေ ခြင်းငှါ၊ ဤလောကကိုအစိုးရသောဘုရားသည် သူတို့၏ဥာဏ် မျက်စိကို ကွယ်စေ၏။" ( ၂ကော ၄း ၃-၄ )
၁။ ပထမအချက်၊ ပျောက်ဆုံးသူများအသက်တာတွင် အဘယ်အရာကို ဝှက်ထားသ နည်း။
ဤသည်မှာ အဘယ့်ကြောင့် ဧဝံဂေလိတရား၊ "ခရစ်တော်၏ဘုန်းတော်နှင့်ပြည့် စုံသောဧဝံဂေလိတရား"ဖြစ်သနည်း။ ထိုအရာမှာ ပျောက်ဆုံးသောသူတို့၌ ဝှက်ထား သောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားသည် အလွန်ရိုးရင်းသောအရာ ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် ငါးမိနစ်အတွင်းမှာလည်း ထိုအရာကို သင်ယူနိူင်ပါသည်။ တမန် တော်ပေါလုက ဧဝံဂေလိတရားအကြောင်းကို ကျမ်းပိုဒ်တိုလေးနှစ်ခုဖြင့်ပေးထားသည်။
"ခရစ်တော်သည် ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်း ငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေခံ တော်မူ၏။ သဂြိုၤလ်ပြီးမှ၊ ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်း သုံးရက်မြောက်သောနေ့ ၌ ထမြောက်တော်မူ၏။" (၂ကော ၄း ၃၊ ၄)
ထိုအရာမှာတစ်ကြောင်းတည်းသာဖြစ်သည်။ စာတစ်ကြောင်းက ဧဝံဂေလိတရားအ ကြောင်းကို ဖော်ပြသည်။
ပထမအချက်မှာ "ခရစ်တော္သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက် အသေခံသည်။" ကျွန်ုပ် တို့ကိုယ်စား အသေခံသောသူမှာ အခြားသူမဟုတ် ခရစ်တော်ဖြစ္သည်။ ကောင်းကင်ဘုံမှာ ဘုရားသခင်စေလွှတ်ထားသည်မှာ ခရစ်တော်ပင်ဖြစ်သည်။ အပျိုကညာဝမ်းတွင် မွေးဖွားလာ သူမှာ ခရစ်တော်ပင်ဖြစ်သည်။ အပြစ်မပါဘဲမွေးလာပြီး အပြစ်မပါဘဲ အသက်ရှင်သောသူမှာ ခရစ်တော်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ရောမဘုရင် ပိလပ်မင်းက "သူ၌အပြစ်တစုံတစ်ရာငါမတွေ့" အပြောခံရသူမှာလည်း ခရစ်တော်ပင်ဖြစ်သည်။ (ယောဟန် ၁၈း ၃၈ ) အပြစ်လုံးဝရှာမတွေ့ ပါ။ အဘယ်မျှလောက်မှန်ကန်ပါသနည်း။ ၎င်း၏ရန်သူများကပင် ထိုသူတွင်ရှိသောအပြစ်ကို ရှာမတွေ့ကြပါ။ သူသည် ဗိမာန်တော်ကို သုံးရက်နှင့်ပြန်ဆောက်မည်ဟုပြောဆိုသည်ဟုသာ စွပ်စွဲပြောဆိုကြပါသည်။ သူမပြောသည့်အရာကိုသာ အသုံးပြုပြောဆိုကြသည်။ ထိုအရာမှာ မု သာသာဖြစ်သည်။ သူ့ကိုသတ်ရန် အကြောင်းပြနိူင်သည့်အရာကိုသာပြောဆိုကြပါသည်။ ထိုသူမှာ မုသားမပါသည့် ခရစ်တော်ပင်ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်စုံတစ်ရာကိုမျှမလုပ်၊ လူများကို သာကယ်တင်သောသူဖြစ်သည်။ စုံလင်သော ဘုရားသခင်၏သားတော်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဒုတိယအချက်မှာ ခရစ်တော်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေခံတော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်ကြွေး ဆပ်ဖို့ ရန်ကားတိုင်ပေါ်တွင်ငါတို့ကိုယ်စား ခရစ်တော်သည်အသေခံတော်မူပြီ။ တမန်တော်ပေတရုဆိုခဲ့သည်မှာ-
"ဖြောင့်မတ်တော်မူသောသူသည်၊ မဖြောင့်မတ်သောသူတို့အတွက်၊ ဒုစရိုက်အပြစ်များကြောင့် တစ်ခါခံတော်မူ၏။" (၁ပေ ၃း၁၈)
"သူခံရသောဒဏ်ချက်အားဖြင့်ငါတို့သည်အနာပျောက်လျက်ရှိကြသည်။" (ဟေရှယ ၅၃း၅).
“ထာဝရဘုရားသည်ခပ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကိုသူ့အပေါ်၌တင်	တော်မူ၏။(ဟေရှာယ ၅၃း၆).
ခရစ်တော်သည်ကျွန်ပ်တို့ကိုယ်စားဖြစ်တော်မူ၏။ ဘုရားအမြင်တွင်ကျွန်ပ်တို့အပြစ် တွက်ပေးဆပ်ရန်ကိုယ်စား အသေခံတော်မူ၏။
တတိယအချက်မှာ- ခရစ်တော်သည်သဂြိုလ်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီး၊ သုံးရက်မြောက် သောနေ့၌ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်၏။ အမှန်စင်စစ်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံတော်မူ၏။ သူ၏ အလောင်းကိုသချိုင်းဂူထဲသို့ထား တော်မူ၏။ သချိုင်းဂူကိုဖုံးထားပြီး သူ၏ခန္ဒာ ကိုယ်ကိုထား ခဲ့ထားကြသည်။ သို့သော်လည်း သုံးရက်မြောက်သော နေ့၌ သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက် တော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ပ်တို့အားထာဝရအသက်ပေးရန် သေခြင်းမှခန္ဒာကိုယ် အားဖြင့်ထမြောက် ခဲ့သည်။
“သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကိုရမည်အကြောင်းတည်း။” (ယောဟန် ၃း၁၅)
ထိုတရားသည် ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ရိုးရှင်သောတရားဖြစ်သည်။
“ငါတို့သည်အပြစ်ရှိစဉ်ပင်၊ ခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အ သေခံတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ယခုတွင်အသွေးတော်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ် ရာသို့ရောက်ပြီးမှ၊ ထိုသခင်အားဖြင့်အပြစ် ငရဲမှကယ်ချွတ်တော်မူ ခြင်းသို့ ရောက်မည်အကြောင်း…ဖြန်ဖြေပေးတော်မူ၏၊ သူ၏အသက် တော်အားဖြင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းတည်း။” (ရောမ ၅း၈-၁၀)
ထိုတရားသည်ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်သည်။ ဤအချက်များကိုငါးမိနစ်အတွင်း က လေးတစ်ယောက်ကို သင်ကြားနိူင်သည်။ ဒီဘုရားကျောင်း နှစ်ကြိမ်၊ သုံးကြိမ်လာပြီးသူများ ဤအချက်ကိုသိပြီးသားဖြစ်ပါသည်။သင်တို့ဧဝံဂေလိအချက်အလက်များကို သင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါ သည်။ မရသေးဘူး…မရသေးဘူး…မရသေဘူး..ကယ်တင်ခြင်း မရသေးဘူး။ သင်တို့သည် ဧဝံဂေလိတရားကိုသိကြပြီ၊ သို့သော် ကယ်တင်ခြင်းမရကြသေးပေ။ ငါတို့ဟောပြောသော ဧဝံဂေလိတရားသည်ဖုံးအုပ်လျက်ရှိလျှင်၊ ဆုံးရှံးခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့အားသာ ဖုံးအုပ် လျက်ရှိ၏။ (၂ကော ၄း၃)
၂။ ဒုတိယအချက်မှာ- ပျောက်ဆုံးသောလူမျာအတွက် ဘာ့ကြောင့်ဧဝံဂေလိတရားဖုံး ကွယ်သနည်း။
ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာတွင်အဖြေရှိပါသည်။ လောကကို အစိုးရသောဘုရား သည်သူတို့၏ဥာဏ်မျက်စိကိုကွယ်စေ၏ (၂ကော ၄း၄)။ စာတန်သည် လောက၏ ဘုရားများ ကိုခေါ်တော်မူ၏။ ယောဟန် ၁၂း၃၁တွင် စာတန်သည် လောကကိုအစိုးရသော မင်းကိုခေါ် တော်မူ၏။ ကျွန်တော်တို့ပြောရမည်မှာ ၁ယောဟန် ၅း၁၉ ဖြစ်သည်။
Scofield ကျမ်းစာက ဤသို့ရေးသားသည်။
NASV က ဤသို့ရေးသားထားပါသည်။
ဤကျမ်းပိုဒ်သည်စာတန်ထိန်းချုပ်သော ဘုရားမဲ့ဝါဒီများ၊ မှားယွမ်းသောဘာ သာတရားများ၊ မတ ရားသောလူများနှင့် ကောက်ကျစ်သောအကြံစည်များ စသည့်လောကီ နည်းယာမများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော် ပြခဲ့သည်။ လူအများစုတို့၏ အမြင်၊ ပန်းတိုင်၊ ခံယူ ချက်၊ စိတ်ကူးယျာဉ်တို့သည် ဒီခေတ်ကြီ၏လောကီစိတ် ဝိညာဉ်ဖြင့်ထိန်း ချုပ်ထားသည်။ Ellicott သည် “အငြိုးထားသောစိတ်၊ မုသားနှင့် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သောလက်တွေ့ လုပ် ဆောင်ချက်များကို မကောင်းဆိုးဝါးကိုးကွယ်ခြင်းဟုခေါ်သည်”။ (Ellicott’s Commentary on the Whole Bible, ကျမ်းစာတစ်ခုလုံး အပေါ်ရှင်းလင်းချက် အတွဲ-၇၊ Zondervan, n.d., p. 375; ၂ကော ၄း၄).
Ellicott သည် ဤလောကီဘုရားသည် ထာဝရဘုရား၏လုပ်ဆောင်မှု တိုက်ရိုက် ရန်ငြိုးထားသည် ဟုပြောသည်။ ထိုအရာတို့သည် စာတန်ဟုခေါ်သော ပြိုင်ဖက်၊ ငြိုးသူရန် ဖက်၊ ရန်သူ၊ ဆန့်ကျင်သူ ဟုအဓိပ္ပယ်ရှိသည်။
ဤအရာကိုခဗျာၤးနားလည်ကောင်းနားလည်မည်။ သို့သော် ပြောင်းလဲခြင်း မရှိ သောသူမှန်သမျှတို့သည်ဘုရားကိုဆန့်ကျင်သောသူများဖြစ်သည်။ လူတိုင်း၊ ကန့်ကွက်မှုမရှိ။ ဧဝံဂေလိတရားကိုတယ်လီဖုန်းနှင့် လုပ်ဆောင်သူများသည် ဤအရာကိုကြုံတွေ့ကြသည်။ ဘုရားကျောင်းလာသောသူတို့တွင် ကြီးမားသောရုန်းကန်မှု၊ အလွန်ခက်ခဲမှုမရှိဘဲ ကယ်တင် ခြင်းခံရသည့်အရာကို တစ်စုံတစ်ယောက်ကမျှမမြင်နိူင်ကြပေ။ ထို့ကြောင့်တစ်ယောက်သော သူ သည် အမှန်စဉ်စစ်ကြွဆင်းလာရခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ရုန်းကန်ရင်းနဲ့ရောက်လာကြ သည်။ သို့သော် မလာသောသူအများစုသည်အမေရိကန်လူဖြူများဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် တစ် နည်းအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် အခြားမျိုးနွယ်စုတိုင်းတို့၏ မှန်စင်စစ်ဖြစ်ပျက်နေသော အရာဖြစ် သည်။ တရုတ်မိခင်ကြီးတောင်မှ “ကောင်းပေ၏” ဟု သူမလာမည်ကိုပြောမည်ဖြစ်သည်။ သို့ သော် သူမကိုနှစ်ခြင်းမပေးပါနဲ့။ သူတို့၏နှလုံးသား ၌ဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်သည်ကို ခဗျာၤးစတင် သဘောပေါက်ပြီး မကြာမကြာဖြစ်ပျက်ကြောင်းကို သူတို့ပြောသည်။ Ellicott ရေးသော မုသားစိတ်နှင့် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်း တို့ကဲ့သို့ သူတို့၏အတွေးအခေါ်များသည် ဤလောကီတရားက ထိန်းချုပ်ခဲ့သည်။
၁၉၇၅. ဧပြီလ တွင် ဤအသင်းတော်ကိုစတင်ခဲ့ပါပြီး ကျွန်တော် ရား၏လူများ၊ ဘုရား၏ပြိုင် ဖက်၊ ရန်သူဟူသော သူတို့၏နှလုံးကိုစာတန်ထိန်းချုပ် သူများဖြစ်သည့်လောကီ ဝိညာဉ်နှင့် မဆုံးနိူင်သောနာကျင်မှုတိုက်ပွဲ၊ တို့ဖြင့် နှစ်လေးဆယ်တိုင်အောင်လွန်စွာ ရုန်းကန် ခဲ့ရသည်။ ဒေသနာကျမ်း ၂း၂ တွင် စာတန်ကို မိုးကောင်းကင်တန်ခိုးရှင်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ယခုတွင်သူ၏ဝိညာဉ်သည်နာမထောင်သောကလေး သူငယ်တို့၌အလုပ် လုပ်သောသူဟုခေါ် သည်။ ထိုစာတန်သည် လောကီဘုရင်ဖြစ်ကြောင်း၊ စစ်မှန်သောဘုရား၏ရန်သူဖြစ်ကြောင်း၊ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်ဖြစ်ခြင်းမှနှလုံးသားတိုင်းကိုတားမြစ်ခြင်းမျိုးကိုလုပ်ေဆောင်သောသူဖြစ်သည်။ဤအရာသည်ကျွန်ပ်၏ခံယူခြင်းတစ်ခုထဲမဟုတ်ပေ။နှစ်ဆယ်ရာစုတွင်နာမည်ကြီးအင်္ဂလိပ်တရား ဟောဆရာဖြစ်သော Dr. Martyn Lloyd-Jones မှ မှတ်တမ်းတင် ထားသည်။ Dr. Lloyd-Jones ကပြောခဲ့သည်မှာ-
မကောင်းဆိုးဝါးငါတို့ကိုရှုပ်ထွေစေရန်အမြဲစောင့်နေသည်။ သူသည် ဘုရား သခင်၏အလုပ်ကိုဖျက်စီးခြင်သည်-ရှုပ်ထွေးသောအရာ တိုင်း တွင်၊ သူ၏ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ် အလိမ္မာဖြင့်သိမ်းသွင်းသည်။ (Martyn Lloyd-Jones, M.D., ဝိညာဉ်ရေးရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာ, Kingsway Publications, ပုံနှိပ်တိုက်၊ ၁၉၉၉, p. ၁၅၈)။
အခြားတစ်နေရာတွင် Dr. Lloyd-Jones ဖော်ပြသောစာတန်မှာသူ၏ကြီးမားဆုံးကြိုးစား မှုသည် လူယောကျာၤးနှင့် လူမိန်းမကို ဘုရားထံမှဝေးကွာစေရန်ဖြစ်သည်။ စာတန်သည် ဘုရား သခင်၏ အကြီးမားဆုံးသောရန်ညိူးဖြစ်ပြီး၊ သူဖြစ်တည်ရာတိုင်းတွင် ဘုရားသခင်ကိုမုန်း သည်။ (Authentic Christianity, တွဲ-၄၊နူတ်ကပတ်တော်အားကိုးခြင်း၏အောင်လံတံခွန်၊ ၁၉၆၆. p. ၄၃)၊ စာတန်သည် သင်တို့၏ဥာဏ်မျက်စိကို ကွယ်စေပြီး၊ သင်တို့မှ ဧဝံဂေလိ တရားကိုဖုံးကွယ်တော် မူ၏။
၃။ တတိယအချက်- ပျောက်ဆုံးသောသူများထံ ဧဝံဂေလိတရားကို မည်သုိ႔ ဝှက် ထား ပါသနည်း။
Dr. Lloyd-Jones က "မာနတ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ရှုပ်ထွေးစေရန် အမြဲစောင့်လျက်နေ သည်" ဟုဆိုပါသည်။ ဧဝံဂေလိတရားသည် ဘုန်းတန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံသောအရာ၊ အံ့ဘွယ်ကောင် သောအရာ၊ ကျွန်ုပ်တို့အား လွတ်မြောက်ခြင်းနှင့် မျှော်လင့်ခြင်းကို ပေးပါသည်။ မာနတ်က ထို အရာတစ်စုံတစ်ခုသင်ရရှိသည်ကို အလိုမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောကျမ်းပိုဒ်က သူသည် ကျွန်ုပ်တိုသည် ဧဝံဂေလိတရားကို နားမလည်နိူင်အောင် ဥာဏ်မျက်စိကို ကွယ်စေသည်ဟု ဆို ထားပါသည်။ စာတန်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ရှုပ်ထွေးစေရန် အမြဲစောင့်လျက်နေပါသည်။ စာတန် ကကျွန်ုပ်တို့ကို ရှုပ်ထွေးစေသည့် နည်းလမ်းအနည်းငယ်ကို ကျွန်ုပ်ဖော်ပြလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အား ဘုရားသခင်ကိုးစားခြင်းမှလည်း ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ စာတန်က နည်းလမ်းများစွာကို အသုံးပြုထားခြင်းမဟုတ်သောကြောင့် ကျွန်တော်အများကြီး မဖော်ပြတော့ပါ။ သူက သင်မည် သည့်ထောင်ခြောက်နှင့်မိတတ်သည်ကို လုံးဝသိကြသောကြောင့် အများကြီးသုံးရန် မလိုအပ် တော့ပေ။ သူအသုံးပြုထားသည့်နည်းလမ်းသုံးခုရှိပါသည်။ ထိုအရာအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းမရ ရှိနိူင်အောင် ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
၁။ နတ်ဆိုးသည် သင်၏စိတ်နှလုံးထဲသို့အယုံသွင်း၍ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ သင့်ကို"အရှုံးပေးစရာများစွာရှိသည်၊ ဘုရားကျောင်းသို့လာသည်မှာ ကောင်းပါသည်။ သို့သော် စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်တစ်ဦးသာဖြစ်လာခဲ့ လျှင် များစွာသောအရာကို ရှောင်ကြဉ်ရပါမည်" ဟုလည်းစဉ်းစားစရာ တွေထည့်သွင်း ပေးသည်။ ယေရှုက စာတန်ပေးသောအတွေးအခေါ်ကို မေးခွန်းဖြင့်ပြန်၍ဖြေကြားပါသည်။ ယေရှုက မေးခွန်းကိုဖြေကြားရာတွင် မေးခွန်းမေးခြင်းဖြင့် အဖြေပေးလေ့ရှိပါသည်။ မာနတ်က ရှောင်ကြဉ်စရာ များစွာရှိသည်ဟုဆိုလျှင် "လူသည် မိမိ စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလဲလှယ်ရန်စေ ရန် အဘယ်အရာကိုလုပ်ဆောင်ရမည်နည်း"ဟု ယေရှုက ဆိုထားသည်။ "လူသည် ဤစကြာဝဠာကို အကြွင်းမဲ့အစိုးရ၍၊ မိမိအသက်ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံး လျှင် အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်း။" (မာကု ၈း ၃၆-၃၇ ) အရာခပ်သိမ်းကို ရရှိနိူင်ပြီး စိတ်ဝိညာဉ်သည် ဆုံးရှုံးလျှင် ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်းမရှိဘဲ ထာဝရပျက်စီးခြင်းခံရမည်။ ထာဝရကာလပတ်လုံး မျှော်လင့်ခြင်းလုံးဝမရှိတော့ပါ။
၂။ နတ်ဆိုးသည် သင်၏စိတ်နှလုံးထဲသို့အယုံသွင်း၍ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး "ကျွန်ုပ်ဘုရားကျောင်းကို တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းလာသည်၊ အစီစဉ်တိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်ပါဝင်သည်၊ ကျွန်ုပ်မှန်ကန်သည်ဟု ထင်ပါသည်" စဉ်းစားစေပါ သည်။ Spurgeon က "ယုံကြည်သောသူသည် ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်" ဟုဆိုသောအချိန်တွင် သူတို့သည် နားလုံးဝမထောင်ပါ။ သူတို့သည် ပျက်စီးရာလမ်းသို့သာ လျှောက်သွားနေကြပါသည်။ သူတို့သည် စာတန် ကြောင့် အမှန်တကယ်မျက်စိကွယ်ကြသူများဖြစ်ကြပါသည်။
၃။ နတ်ဆိုးသည် သင်၏စိတ်နှလုံးထဲသို့အယုံသွင်း၍ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး" ကျွန်ုပ်၌ခံစားချက်ရှိသည်၊ ခံစားချက်အတွက် မကြည့်သင့်ဘူးဟူသော သင်အုပ်၏ပြောစကားကို ကျွန်ုပ်သိသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်၌ခံစားချက်မရှိ လျှင် စုံစမ်းသည့်အခန်းတွင် Dr. Cagan ကို ပြောပြစရာမရှိပါ။ Dr. Cagan ကပြောပြသည်မှာ "ဤအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်ကိုပြောပါ။" ဗြိတိသျှ တရားဟောဆရာကြီး Dr. Martyn Lloyd-Jones က "ကယ်တင်တော်မူ ခြင်းနောက်တွင် ဓမ္မသစ်ကျမ်းက 'ခံစားချက်ရှိသူများသည် ကယ်တင် တော်မူခြင်းသို့ရောက်မည်' ဟုမဆိုပါ။ "ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့ သည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်မည်" ဟုသာဆိုသည်။ ဤအရာ ဖြင့် ကျွန်ုပ်အသက်ရှင်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင် ခံစားသည်ဖြစ်စေ၊ မခံစားသည် ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခံစားချက်အားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်သည်မဟုတ်၊ ယေရှုခရစ်၌ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ (ဘုရားသခင်၌ရှိသောဘဝအသက်တာ, Crossway Books, ၁၉၉၅၊ စာ-၁၀၅)
သင်သည် စာတန်၏လက်မှမလွတ်မြောက်နိူင်ကြောင်းကို သတိပြုရန် ဘုရားသခင်က သင့်ကို မကူညီလျှင် ကျွန်ုပ်ပြောသည့်အရာတစ်ခုမျှ အကူအညီပေးမည်မဟုတ်သည်ကို ယခု ကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ သင်သည် ခရစ်တော်ကို ရွေးချယ်မရကြောင်းကို သိရမည်။ Dr. Lloyd-Jones က "ဤလောကကိုအုပ်စိုးသောဘုရားသည် သင်ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်အောင်မလုပ် နိူင်ပါ" ဟုဆိုပါသည်။ ( စိတ်ချမှု၊ Banner of Truth, ၁၉၇၁၊ စာ- ၁၀၅) မိမိကိုယ်ကို အမှန်တ ကယ် ရိုးသားလျှင်၊ သင်၏စိတ်နှလုံးသားထဲတွင် ဘုရားသခင်အား ကျွန်ုပ်ပျောက်ဆုံးပါသည် ဟုအော်ဟစ်ပါမည်။ ယေရှုဘုရားကယ်မူပါ" ဟု တောင်းလျှောက်ပါမည်။ ထိုသို့ဆုတောင်း သောအခါ ယေရှုသည် ဝင်ရောက်လာပြီး သင့်အား ကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်။
မာကုခရစ်ဝင်တွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည် နူနာစွဲသောသူဆုတောင်းသည့်အရာကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရပါသည်။ လူတစ်ယောက်က ခရစ်တော်ထံပါးသို့လာပြီး ထူးထောက်လျက် "အလိုတော်ရှိလျှင် သန့်ရှင်းစေမူပါ" ဟု လျှောက်ထားပါသည်။
"ယေရှုသည်၊ သနားသောစိတ်ရှိသဖြင့် လက်တော်ကိုဆန့်၍၊ ထိုသူကိုတို့ လျက်၊ ငါအလိုရှိ၏၊ သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေဟုမိန့်တော်မူ၏။ထိုသို့မိန့် တော်မူသည့်ခဏချင်းတွင် နူနာပျောက်၍ သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်လေ၏။" (မာကု ၁း ၄၁၊ ၄၂ )
ဤနံနက်ကဲ့သို့ လူတစ်ဦးသည် ယေရှုထံသို့လာပေမည်။ "အလိုတော်ရှိလျှင် သန့်ရှင်း စေတော်မူပါ၊ ငါအလိုရှိသည်၊ သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်လော့။"ထိုအရာမှော ဧဝံဂေလိတရားဖြစ် သည်။ ထိုအရာမှာ ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ယှဉ်သော ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်သည်။ ထိုအရာမှာ သင်၏ မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။ မာနတ်နှင့် ၎င်း၏လှည့်ဖြားခြင်းသည် လွင့်ပြယ်သွားပြီ။ "ယေရှုဘုရား အလိုတော်ရှိလျှင် သန့်ရှင်းစေမူပါ၊ ငါအလိုရှိသည်၊ သန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်လော့။ Spurgeon ၏ကဗျာထဲမှ စကားလုံးလေးကို ယုံကြည်လျှင် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။
အပြစ်ရှိလျက်၊ အားနည်းလျက်၊ မျှော်လင့်မဲ့ ပိုးကောင်
သူသည် ကျွန်ုပ်၏ခွန်အား၊ နှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား
ခရစ်တော်၌ဝမ်းမြောက်လျက် ဆက်လက်ချီတက်ပါ။ ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဘ၊ ဤမနက်တွင် တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် ခရစ်တော်၏လက်တော်သို့ကျရောက်ပြီး ကယ်တင်ခြင်းရမည့်အ ကြောင်း ဆုတောင်းပါ၏။ အာမင်။
ကျွန်ုပ်သိသည်၊ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်ုပ်သိသည်။
("ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်သိသည်။'' အင်နာဒဗလျူဝါဒါးမင်း၊ ၁၉၂၀ ရေးစပ်သည်)
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို Mr. Abel Prudhomme ကဆောင်ရွက်သည်။ ၂ကော ၄း ၃-၆
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ Mr. Benjamin Kincaid Griffith ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းသည်။ “ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်သိသည်”၊ အင်နာဒဗလျူဝါဒါးမင်း၊ ၁၉၂၀ ရေးစပ်သည်။ )
၁။ ပထမအချက်၊ ပျောက်ဆုံးသူများအသက်တာတွင် အဘယ်အရာကို ဝှက်ထားသ နည်း။ ၁ကော ၁၅း ၃၊ ၄၊ ယောဟန် ၁၈း ၃၈၊ ၁ပေ ၃း ၁၈၊ ဟေရှာယ ၅၃း ၅၊ ၆၊ ယောဟန် ၃း ၁၅၊ ရောမ ၅း ၈-၁၀။
၂။ ဒုတိယအချက်မှာ- ပျောက်ဆုံးသောလူမျာအတွက် ဘာ့ကြောင့်ဧဝံဂေလိတရားဖုံး ကွယ်သနည်း။ ယောဟန် ၁၂း ၃၁၊ ၁ယော ၅း ၁၉၊ ဧဖက် ၂း၂
၃။ တတိယအချက်- ပျောက်ဆုံးသောသူများထံ ဧဝံဂေလိတရားကို မည်သုိ႔ ဝှက် ထား ပါသနည်း။ မာကု ၈း ၃၆၊ ၃၇၊ မာကု ၁း ၄၁၊ ၄၂။